नेपालीहरुले पहिलो पटक राष्ट्रवादलाई उचाईमा पुर्‍याएका छन् : पुरञ्जन आचार्य « Pana Khabar
नेपालीहरुले पहिलो पटक राष्ट्रवादलाई उचाईमा पुर्‍याएका छन् : पुरञ्जन आचार्य
२०७४ बर्ष भर्खरै मात्रै सकिएर नयाँ बर्ष २०७५ पनि भर्खरै मात्रै सुरु भएको छ । बितेको कुरालाई सम्झिने त नेपालीहरुको परम्परा नै हो । तर अब आएको यो नयाँ बर्षलाई हामी कसरी सदुपयोग गर्छौं त ? राजनीतिले यो नयाँ बर्षलाई कतातिर लैजाला त ? बितेको साललाई सम्झिदै २०७५ सालको नयाँ दिनहरुमा समृद्धितर्फको यात्रामा कुन कुन राजनीतिक दलहरु सम्मिलित होलान त ? समृद्धि तर्फको यात्रामा राजनीतिक दलहरुको यात्रा कत्तिको अग्रग्रामी होलान त ? के अहिले नै कुनै आकलन गर्न सकिन्छ त ? समृद्धिको यात्रामा समाबेश हुने राजनीतिक दलहरुको भूमिकाको बारेमा अनुमान गर्नु समय सापेक्ष नै हुने छ वा यो अलि हतारको काम हुनेछ ? यस विषयमा पुरन्जन आचार्य र भारत दाहालले माउन्टेन टेलिविजनसंग कुरा गर्दै ब्यक्त गर्दै राखेको उहाँहरुको आआफ्नो धारणा यस्तो रह्यो-
पुरन्जन आचार्य- २०७४ साललाई फर्केर हेर्दा नेपालको शान्ति प्रक्रिया एउटा टुंगोमा पुग्यो । २०७२ सालमा जारी भएको संबिधान कार्यन्वयन भयो । नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक बाम पार्टीहरुले एकता गरेर केन्द्रीय सत्तामा पहिलो पटक नै झन्डै दुई तिहाइले विजय प्राप्त गरे । नेपाली कांग्रेसलाई २००७ सालपछि सबैभन्दा ठूलो डिप्रेसन अहिले लागिरहेको छ । बिगतलाई फर्केर हेर्दा मैले सम्झिदा तीनवटा कुरा सम्झिन्छु, एउटा त भनि हालें, नेपालमा नेपालीहरुले पहिलो पटक राष्ट्रबाद्लाई उचाईमा पुर्याएका छन्, २०७४ साल अगाडिको घटनाले गर्दा २०७४ सालमा जनताले आफ्नो भोटिंगबाट त्यसलाई म्यान्डेट दिए. २०७४ साल धेरै चुनौतीले भएको थियो । अब आशालाग्दो २०७५ साल चै मेरो अगाडी छ । कन्सटिट्युसन् एउटा सम्झौताको दस्ताबेज हो , समाबेशी कन्सटिट्युसन् आएको छ, २०७४ साललाई सम्झिने क्रममा शाशन संचालनका कैयन त्रुटीहरुलाई पनि स्मरण गर्दै पनि मूलभूत रुपमा सिस्टमहरु हुँदै मुलुक अगाडी बढेको छ । कन्सटिट्युसनले एउटा ट्रयाक चाहिं समातेको छ ।
भारत दाहाल – २०७४ साललाई फर्केर हेर्नेक्रममा मैले आचार्य जीले भन्दा अलि फरक ढंगले बुझ्छु , भन्नै पर्दा र सम्झिनै पर्दा म नेपाली क्रिकेटलाई सम्झिन्छु किनकि त्यसले नेपालको इज्जत धेरै बढाएको छ । चुनाव भैसकेपछि शासन प्रणालीलाई हेर्ने हो भने मेरो भाषामा अथवा संबिधान जारी भएपछी जुन सिमटम देखा परेका छन् त्यसको आधारमा भन्दा १२ बुँदेको दोश्रो संस्करण सुरु भएको छ । त्यो टोटल कोर्सको दोश्रो संस्करण सुरु भएको छ. ।२०७५ साल चै मैले २०७४ साल भन्दा पनि खराब अवस्थाबाट गुज्रिने देख्छु । यो मैले के आधारमा भनेको हो भने, २०७५ सालमा हामीले अर्थतन्त्रको जुन स्वरूप हेर्यौं सोधान्तर अहिलेसम्मकै सबैभन्दा उच्च बिन्दुमा छ भन्ने पढ्न पाइयो । स्वेतपत्रले नै देशको ढुकुटी रित्तो छ भन्ने कुरा आयो । नेपाली जनशक्ति र नेपाली लगानीमा उत्पादनमुखी कुनै उद्योगको म सम्भावना देख्दिन दलालहरुको मार्केट बिस्तार गर्ने लक्षण देखियो । दोक्लाम विवादमा पश्चिमाहरुले साथ् नदिएपछि नै इन्डिया निकै हच्किएको देख्छु । भारत भ्रमणमा केपी ओलीको स्वागत र दलाइ लामाको गतिबिधिमाथि नियन्त्रणको घटनाले म इन्डिया निकै हच्किएको देख्छु. र, यसले इंडिया र पश्चिमाहरुको बिचमा केही कन्फ्लिक्ट आउँछ भन्ने मलाई लाग्छ ।
पुरन्जन आचार्य- देशहरु टुक्रिने कुरा हाम्रोमा भन्दा युरोपमा भैरहेको छ । स्कटल्याण्ड, आयरल्याण्ड, क्यानाडाका कुरा हेर्नुस । जनमत संग्रह हुन्छ त्यसले निर्धारण गर्छ । देश टुक्रिने कुरा डेवलप देशहरुमा ती कुरा सामान्य भैसक्यो । युरोपलाई डेवलेप्मेंट चाहिएको छ तर डाइबर्सिटी चाहिएको छैन । सेकुलारिज्म र डाइबर्सिटी युरोपबाट नै आएको हो । इंडियाले के सिकाको छ भने विभिन्न डाइबर्सिटीमा पनि, बिभिन्न जातजातिमा पनि यी सबै कन्फ्लिक्टलाइ पनि इंडियाको डेवलेप्मेंटले समाहित गरेको छ तर युरोपमा त्यस्तो छैन ।
भरत दाहाल – अहिलेको जुन बाम भन्ने तत्व छ यो साम्राज्यबादको जगेडा शक्ति हो त्यो भन्दा माथि यो केही पनि हैन । परेको बेलामा प्रयोग हुने यो जगेडा शक्ति मात्रै हो अरु केही पनि हैन । विप्लब्को कुरो नगरौं, सामाजिक समस्या रहिरह्यो भने आज विब्लब छ भने भोलि कुनै ए,बि,सी,डी खडा भैहल्छन , त्यसैले समस्याको समाधानमा जान्न भन्ने कुरा बिब्लब र सरकारको बिचमा द्वन्द्व बढ्ने जुन संकेत देखिएको छ यसले के कुरा प्रष्ट पारेको छ भने कांग्रेस सुरुको चरणमा प्रयोग भयो , माओबादी दोश्रो चरणमा प्रयोग भयो अब ग्रान्ड डिजाइनको प्रयोगको थलो एमाले हो यसमा कुनै शंका छैन । अबको दिशा भनेको संघीयताको पतन हो र त्यही पतनको जगबाट डिक्टेटरको जन्म हुन्छ ।